Nepal - [झटारो] धनराजहरू कुरा बुझ्दैनन्
हाम्रो सबैभन्दा पुरानो, सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक र अस्ति भर्खरसम्मको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन–समीक्षा बैठक महिनौँसम्म बस्यो । लामो इतिहास बोकेको पार्टीको बैठक लामो हुनु स्वाभाविकै हो । तर, बैठकमा पार्टीका नेताहरूले आफ्नै सभापतिको धूवाँदार विरोध गर्दै आफ्नै आङको छारो उडाएर बैठक स्थललाई कुइरीमण्डल बनाउनुचाहिँ स्वाभाविक होइन । गएका निर्वाचनमा नेतृत्वले उम्मेदवारको टिकट बिक्री गरेको कुरामा धनराज गुरुङलगायत युवा नेताहरूले ठूलो आपत्ति जनाए । टिकटसँग घर–घडेरीदेखि गाडीसम्म साटेको भनेर उनीहरू सभापतिविरुद्ध खनिए ।
मुलुकमा कस्ता–कस्ता समस्या छन्, त्यतापट्टि उनीहरूको कुनै ध्यान छैन । सेयर बजार ओरालो लागेको छ । कांग्रेस सरकारले मुलुकलाई टाट उल्टाएर छाडेको भनेर अर्थमन्त्रीले आरोप लगाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले भएभरका शक्तिशाली निकायहरू आफ्ना अन्तर्गत ल्याएर सरकारलाई धमाधम अधिनायकवादतिर अग्रसर गराइरहेका छन् । त्यस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दा छाडेर सक्किइसकेको निर्वाचनमा टिकट बिक्री गरेको सामान्य विषयमा चोसो पसारेर बसेका छन्, पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी युवा नेता भनाउँदाहरू ।
टिकट बिक्रीको विरोध किन गर्छन् यिनीहरू ! टिकट बेचेको हो, सित्तैँमा दिएको त छैन नि ! त्यो पनि चर्को मूल्यमा दिएको हो, सस्तैमा दिएको होइन । यो हुलाकको, सिनेमाको, चिडियाखानाको वा गाडीको टिकटजस्तो सस्तैमा पाउने टिकट पनि होइन, माननीयको टिकट हो । उच्च मूल्यमा बिक्री भएको छ, कसरी नराम्रो भयो ? पार्टीको एउटा टिकटमा घर–घडेरी, बंगला, गाडी आउँछ भने कांग्रेसको टिकटको महत्त्व कति रहेछ, त्यो बुझौँ र गौरव गरौँ न ! पार्टीमा किन वितन्डा मच्याउनू ?
अर्को सकारात्मक कुरा के छ भने बाहिरको मान्छेलाई टिकट बेचिएको छैन । कांग्रेसका मान्छेको पुँजी कम्युनिस्टहरूका हातमा गएको भए पो चिन्ता, कांग्रेसभित्रै रहेको छ । टिकट आन्तरिक बजारमै खपत भएको छ । अझै खुसीको कुरा, त्यसमा लिलाम बढाबढसमेत गरिएको छ । थोरै कबोल गर्नेलाई टिकट दिएको भए धाँधली गरेको वा भ्रष्टाचार भएको भन्न मिल्थ्यो, बढी कबोल गर्नेलाई नै बेचिएको हो । त्यसैले यसमा एकदमै स्वच्छता अपनाइएको छ ।
राजदूतको पद बिक्री गरिएको भनेर पनि उनीहरूले बैठकमा आक्रोश पोखे । कति गजबको कुरा भएको छ । राजनीति पनि आर्थिक उपार्जन गर्ने माध्यम बनेको छ । बरू, अब जुुनसुकै महत्त्वपूर्ण पदहरूलाई लिलाम बढाबढमा राखेर नियुक्ति दिने परम्परा थालौँ न ! अर्थाेपार्जनको सरल, सटीक र वैध तरिका यसभन्दा राम्रो के हुन्छ ? धनराजहरूले कुरा किन नबुझेको ?
चुनाव हारेकामा युवा नेताहरू नेतृत्वमाथि खनिनुको पनि कुनै तुुक देखिँदैन । प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा निर्वाचन लडेपछि कि जितिन्छ कि हारिन्छ । यसपालि अलिकति हारियो । त्यो पनि नेतृत्वका कारणले हारेको होइन । वामपन्थीहरूले हराएका हुन् । जनताले वामपन्थीहरूलाई मत दिए त सभापतिको के दोष ?
अन्तिम र सत्य कुरा के हो भने हाम्रो पार्टीमा गुटहरू छन् । सभापतिको आलोचना गर्नेहरू प्रतिपक्षी गुटका हुन् भन्ने दुनियाँँलाई थाहै छ । सभापतिज्यूका गुटका सदस्यहरूले सभापतिको विरोध गरेका छैनन् । प्रतिपक्षी गुटका अल्पसंख्यामा रहेका सदस्यहरूले जति चिच्याए पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन । त्यसैले यस्ता चिच्याहटलाई स्वाभाविक रूपमा लिँदै हामी सभापति गुटका सदस्यहरूले अगाडि बढिरहने अठोट गरौँ । जय नेपाल !